Cali Guudlaawe oo xiriir toos ah la sameeyey dowladda Itoobiya iyo ajandaha kulan dhexmaray.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Safiirka Dowlada Itoobiya u jooga Soomaaliya Danjire Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan.
Kulankaan ayaa looga hadlay Arrimaha Amniga gaar ahaan xoojinta howlgalada la dagaalanka Al-Shabaab ee ka socda degaannada Hir-Shabeelle.
Danjiraha Itoobiya ee Soomaaliya Danjire Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan ayaa balan qaaday in Maamulka Hir-Shabeelle ay kala Shaqeyn doonaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa degaannada ay kaga sugan yihiin Gobolada Hir-Shabeelle.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxaa la filayaa in uu kulamo kula qaato Magaalada Muqdisho mas’uuliyiin kala duwan kadibna uu dib ugu laabto Magaalada Jowhar.
ETHIOPIA, Kenya and others Somalia marnaba faraha kala bixi maayaan waayo caqliga siyaasiga soomaaliiga ah waa gali la’dahay inuu xorno noqdo oo dalkiisa dadkiisa ku kalsoonaado..
Jiilkii colaada u hayay cadawga waa dhamaaday waxana badalay ku u haysta inay xajka la siman yihiin kuwaas aan soo sheegnay, gaar ahaan qurbajooge isagu waxba ma aaminsana, waa xagay ka bisishahay xaalkiisu…